Sanduuqa warqadda | Sapsa
Lix weel ayaa lagu qariyey meel hal mayl u jirta agagaarka Dugsiga Hoose ee St. Anthony Park. Gudaha sanduuqa warqad kasta waxaa kujira suufka khadadka oo leh shaambad lambarkiisu yahay 1, 2, 3, 4, 5, ama 6. Shaqadaadu waa inaad soo hesho dhamaan lixda sanduuq oo aad ka soo qaadataa shaambadaha khadadka ee leh lambarrada 1-6 warqad ama buuggaagta
Sawir qaado oo u gudbi madaxwaynaha@sapsamn.org si loogu aqoonsado wargeyskeena toddobaadlaha ah ee SAPSA, Wolf Pack Arbacada!
Bilowga hal-abuurkaaga, waxaad awoodi doontaa inaad soo qaadato shaabad iskeed u gaar ah oo adiga kuu gaar ah si aad ugu calaamadeysato buugaagta xaashida ee sanduuq kasta oo leh magacaaga iyo shaambaddaada shaqsiyeed! Yuu noqon doonaa kan ugu horreeya? Ayaa helay sanduuqa adiga kahor adiga? Waa inaad raadisaa sanduuqa waraaqaha si aad u ogaato.
Riwaayaddan awgeed, waxaad u baahan doontaa waxyaabo yar:
Waraaq yar ama buug yar oo lagu uruurinayo shaambadaha khad.
Kumbuyuutar, iPad ama taleefan casri ah si aad u isticmaali karto khariidadda Google ee tan loo dejiyey. Halkan guji si aad u tagto qariirada.
Shaabad iskood u gaar ah oo adiga kuu gaar ah si aad calaamaddaada ugu dhex gasho buugaagta lagu qoro gudaha sanduuq kasta. Kuwaas waxaa lagu heli karaa weel balaastik ah oo ku yaal keydka albaabka hore ee dugsiga. Fadlan (quruxsan fadlan!) Ilmo kasta hal shaabad. Waxaan kaliya ka dhigeynaa 25 oo la heli karo markiiba, markaa fadlan emayl u dir madaxweyne@sapsamn.org haddii tirada stamps-yada ay hooseeyaan si aan wax badan ugu darno. Shaabaddu adigaa iska leh. Iyo, dabcan, waa lagusoo dhaweynayaa inaad isticmaasho shaambadaada haddii aad mid leedahay.
Sida loo ciyaaro:
U hel qof weyn inuu kula ciyaaro ama weydii ogolaanshahooda inuu ku ciyaaro. Tani waxay ku xirnaan doontaa da'daada iyo xeerarka qoyskaaga.
Ka soo qaado shaambad shaqsiyeed Dugsiga Hoose ee SAP. Eeg tilmaamaha kore.
Soo qaado buug yar ama warqad aad ugu hibeyn karto mashruuca. Waxaan haynaa dhowr qaybood oo kaar adag ah oo lagu dhejiyay shaambadaha shaqsiga ee dugsiga haddii aad jeclaan lahayd inaad taas isticmaasho.
Tag khariidadan Google oo raac tilmaamaha si aad u hesho sanduuqyada waraaqaha.
Markaad mid hesho, waxaad samaynaysaa laba waxyaalood:
Qor magacaaga iyo taariikhda / waqtiga aad ka heshay sanduuqa warqadda ee ku yaal buuga log. Adeegso shaambadaada shaqsiyeed si aad ugu sameyso calaamadeynta magacaaga. Waxaad sidoo kale uga tagi kartaa qoraal yar kuwa kale ee quudhsada xilligan.
U isticmaal suufka khadadka iyo shaambad ku yaal sanduuq kasta si aad ugu calaamadeysid warqadda dushaada ama buugaagta xusuus qorka ah.
Wax walba dib ugu celi sanduuqa, si adag u xir oo u celi sidaad u heshay.
Raadi dhammaan lixda sanduuq.
Markii aad dhamayso, waxaad u gudbin kartaa sawirkaaga shaabadda shaabadaysan oo ah madaxweyne@sapsamn.org waxaanan kugu aqoonsan doonnaa joornaalkeena toddobaadlaha ah.